Siriana Mpitsoa-ponenana Maniry Fanangonam-bola Ho An’ny Toeram-pisakafoanany Ao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2015 5:21 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, русский, Français, Español, عربي, polski, 日本語, Italiano, Ελληνικά, Português
Nalefa voalohany tao amin'ny bilaogy Migramundo ity lahatsoratra ity, ary naverin'ny Global Voices nalefa araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Injeniera amin'ny mekanika ilay Syriana mpitsoa-ponenana, Talal Al-Tinawi, fa hatry ny nahatongavany tany Brezila ny faramparan'ny taona 2013, nahita antso hafa izy. Taorian'ny fahaketrahana tanteraka tamin'ny resaka an-databatra isan'ambaratongany momba ny fankatoavana ny diplaomany tany Brezila, nahita fomba hafa afaka nanoloana an'io izy mba hahafahany mahazo vola, amin'ny fahandroana, nentanin'ny fankafizan'ireo mponina ny sakafo Syriana-Libane (izay antsoin'izy ireo hoe “sakafo arabo”). Ankehitriny, afaka mitondra azy amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa ilay antso vaovao-ny, raha mety tsara ilay hetsika fangatahana famatsiam-bola ataony.
Nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2014 ny tantara, raha nampiantrano vondrona mpinamana sy mpirotsaka antsitrapo avy amin'ny Adus tao an-tranony i Talal. Adus dia fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana izay manampy ireo mpitsoa-ponenana any São Paulo, toerana ipetrahan'i Talal sy ny fianakaviany. Nahazo dera sy fahombiazana lehibe tamin'ireo vahiny ny sakafony sy ny tohanaina nataony, ary nanome soson-kevitra azy izy ireo hoe maninona moa raha ampiasainy io talentany io mba hanokafany ny fandraharahàny manokana.
Izany no nahaterahan'ny Lakozia Syriana an'i Talal, tolotra sakafo aterina any amin'izay toerana lazainao, izay ataony ao an-tranony, mamatsy sakafo ho an'ireo fety sy hetsika ao São Paulo, tafiditra amin'izany ilay hetsika nentim-paharazana any São Paulo “Fetin'ny Mpifindra monina,” izay nankalaza ny faha-20 taonany tamin'ity taona ity ary nandroso sakafo ho an'ny olona niisa 400 tao Pari Mosque (maoske lehibe ao an-tanàna) nandritra ny Ramadany. Nampianatra mahandro an'ireo mpitsoa-ponenana namany ao Adus ihany koa i Talal. “Hatramin'ilay fety, tsy nitsahatra ny nahandro mihitsy aho,” hoy izy tamin'i Migramundo.
Miaraka amin'ny fanampian'ireo mpirotsaka an-tsitrapo avy amin'ny Adus, nanao hetsika fangatahana fanangonam-bola tamin'ny aterineto i Talal hanangonana 60.000 Reais Breziliana (eo amin'ny 15.000 Dolara Amerikana). Mikasa ny hividy ireo fitaovana fototra ho an'ny orinasany izy amin'ilay vola: lafaoro, vata fampangatsiahana, fitaovana fanapotehana sy fanafangaroana sakafo, fitaovana fanovàna sakafo, ary ireo zavatra hafa ilaina mba hampandeha ny toeram-pisakafoanana.